Addis-Ababa:-Ma Dhab-baa In La Siidaayo Qalbi-Dhagax?
Sunday May 06, 2018 - 14:52:15 in Wararka by Abdi A.
Addis-Aababa-(Caalami-News)-Waa markii ugu horraysay oo Cabdikariim Muuse Qalbi-dhagax warkiisa si rasmi ah loo maqlo tan iyo markii tobon bilood ka hor loo dhiibay dowladda Itoobiya.
Cabdikariim Qalbi-Dhagax ayaa ku jira xabsi-guri ku yaalla Addis-Ababa waxaana shalay halkaasi ku booqday madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam.
Sawirro si weyn loogu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya Axmed Madoobe iyo Qalbi-dhagax oo mar wada taagan marna kuraas kuwada fadhiya.
BBC-da ayaa loo sheegay in madaxweynaha Jubbaland iyo ra'iisul wasaaraha itoobiya ay ka wada hadleen arrinka Qalbi-dhagax iyadoo Axmed Madoobe uu Itoobiya si rasmi ah uga codsaday in Qalbi-Dhagax xoriyadiisa dib loogu soo celiyo. Balse Itoobiya weli kama aysan hadlin amuurtan.
Ra'iisul wasaare Abiye Axmed Cali
Dr Abiy Axmed Cali Labo bilood ka hor Itoobiya waxaa ka dhacay isbadal siyaasadeed oo mug weyn. Waxaa yimid ra'iisul wasaare cusub,Gudoomiye baarlamaan oo cusub iyo waliba isbadal kooban oo xaga golaha wasiirada lagu sameeyey.
Siidaynta maxaabiista waxaa ka faa'iisaystay Bashiir Makhtal Daahir oo dhowr iyo tobon sano u xirnaa dowladda Itoobiya kuna eedeysnaa in uu ka tirsanyahay ururka ONLF. Bashiir oo dhalashada Canada haysta wuxuu dib ugu noqday dalka Canada.
Golaha wasiirada go'aankoodii
Go'aan ay soo saareen golaha wasiirada dowladda federaalka ayaa lagu sheegay in dhiibista Cabdikariin Qalbi-dhagax ay ahayd go'aan ay dowladu qaadatay.
'Qalbi-dhagax waxuu dalka ka waday falal lid ku ah amniga waxuuna xiriir la lahaa kooxaha Alshabaab', dowladda ayaa sidoo kale ururka ONLF ku tilmaamtay mid argagixiso ah.
Saxaafada ayaa sidoo kale si weyn u faaqiday hadalhaynta dhiibista Qalbi-dhagax. Ka dib waxaa la saaray guddi amuurtan soo baara baarlamaanka horgeeya sidii ay wax u dhaceen. bilooyin ka dibna guddigii waxay baralamaanka horkeenay in dhiibistii Cabdikariin Qalbi-dhagax ay qalad ahayd isla markaasi si sharcidaro ah loogu dhiibay dowladda Itoobiya. Waxaa sidoo kale baaritaankaasi ay gudigu sameeyeen eedeyn loogu jeediyey hay'adaha amaanka.
Madaxweynaha Maxuu ka Yiri Berrigaasi ?
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku raacay go'aanka ay soo saaren guddigii baarlamaanka ay xaajadan u saareen.